Al Shabaab oo weerar ku qaaday saldhig ciidan oo kuyaalla Degmada Afgooye | Allbanaadir.com
Home NEWS Al Shabaab oo weerar ku qaaday saldhig ciidan oo kuyaalla Degmada Afgooye
Al Shabaab oo weerar ku qaaday saldhig ciidan oo kuyaalla Degmada Afgooye
Dagaalyahano katirsan Al Shabaab ayaa xalay xilli dambe weerar culus waxa ay ku qaadeen saldhig ciidanka dowladda Soomaaliya kaga sugnaayeen degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Ciidamada dowladda ee la weeraray iyo kuwa Al Shabaab ayaa waxaa dhax maray dagaal daqiiqado kooban socday oo la isku adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan, waxaana dagaalka cabsi badan ku beeray dadka deegaanka.
Dagaalka ayaa ka dhacay saldhiga ciidanka dowladda ku leeyihiin buundada yar ee degmada Afgooye, waxaana markii dambe istaagay dagaalka kadib markii Al Shabaab dib ugu laabteen halkii ay kasoo duullaan tageen.
Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa wararku sheegayaan in dagaalka ka dhashay, mana jiro wax faah faahin oo ah oo dagaalka ka bixiyeen taliska ciidanka dowladda iyo maamulka degmada Afgooye.
Xaalada degmada Afgooye gaar ahaan aagii xalay dagaalka ka dhacay ayaa saakay degan, ciidamada dowladda ayaana saakay sameeyay howlgalo ay ku daba kaceen dagaalyahanadii xalay weerarka kusoo qaaday.
Previous articleAmarkii uu soo saaray RW Rooble oo ka dhaqan galay Wasaaradda arrimaha dibeda
Next articleMadaxweyne Biden iyo Xaaskiisa oo booqday Iskuulkii ardayda badan lagu laayay (Sawirro)